27-Jul-2020 to 07:45
APA-Johannesburg (South Africa) — South Africa’s opposition Economic Freedom Fighters party leader Julius Malema has demanded that much of the country’s arable land currently in the hands of the white minority should be returned to black owners without any compensation.
26-Jul-2020 to 11:44
COVID-19: Over 320 Zimbabwean health workers test positive
APA-Harare (Zimbabwe) — More than 320 Zimbabwean health workers have tested positive for coronavirus since March, a senior government official announced on Sunday.
26-Jul-2020 to 03:07
S/Africa tribute to late Tanzanian president
APA-Pretoria (South Africa) — South African President Cyril Ramaphosa has paid tribute to fallen Tanzania leader Benjamin William Mkapa following his demise at the weekend due to illness, the presidency has said.
25-Jul-2020 to 14:25
Zimbabwe to summon US envoy over ‘interference’ - Minister
APA-Harare (Zimbabwe) — The Zimbabwe government has threatened to summon the US ambassador in Harare over what it claims is Washington’s alleged interference in this week’s arrest of a top journalist critical of President Emmerson Mnangagwa’s rule.
25-Jul-2020 to 11:51
Zimbabwe dollar's future inspires confidence - minister
APA-Harare (Zimbabwe) — The future of the Zimbabwe dollar inspire confidence in the government to continue to maintain it as legal tender, a senior official has said.
24-Jul-2020 to 16:39
Zimbabwe journalist denied bail in protest trial
APA-Harare (Zimbabwe) — Zimbabwe investigative journalist Hopewell Chin’ono was on Friday remanded in custody to August 7 after a Harare magistrate denied him bail during a trial in which he is accused of plotting to remove President Emmerson Mnangagwa through violent means.
24-Jul-2020 to 13:48
S/African gov't to probe abuse of Covid-19 funds – Ramaphosa
APA-Pretoria (South Africa) — South Africans, including government employees, who allegedly embezzled funds meant to facilitate the work of containing the coronavirus pandemic should be probed and prosecuted, President Cyril Ramaphosa has ordered.